အာဂငျြတီးနားက မကျဆီရဲ့ ခဈြသူဟောငျးနဲ့ နူးကမျ့ဇာတျလမျးက လှပမှာလား – Sports A2Z
La Liga • UCL&UEL
အာဂငျြတီးနားက မကျဆီရဲ့ ခဈြသူဟောငျးနဲ့ နူးကမျ့ဇာတျလမျးက လှပမှာလား
ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ နှဈနှဈစာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ တိုကျစဈမှူးဆာဂြီယို အဂှယျရိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂျနဲ့ ဆယျစုနှဈတခုအကွာ သံယောဇဥျကို အဆုံးသတျခဲ့ရတာဖွဈပွီး မနျစီးတီးကနေ ထှကျခှာရခြိနျမှာ ကတျတလနျအသငျးကတော့ အသကျ ၃၂ နှဈသားကို စာခြုပျဖကျြသိမျးကွေး ယူရိုသနျး ၁၀၀ နဲ့ ခညျြနှောငျပွီး တနျဖိုးကွီးကွီးထားသှားခဲ့တာပါ။
မကျဆီအနနေဲ့ နာမညျကြျောကွားလှနျးခဲ့တဲ့ MSN တိုကျစဈအတှဲကို ဖျောဆောငျခဲ့အပွီး ဆှာရကျဇျ၊ နမောတို့နဲ့ လမျးခှဲခဲ့ရခြိနျမှာ သူ့ရဲ့အာဂငျြတိုငျးအသငျးဖျော အဂှယျရိုနဲ့ တှဲကစားခငျြကွောငျး ဘာစီလိုနာကို တောငျးဆိုခဲ့တာဖွဈပွီး ဒါဟာ အသငျးဥက်ကဌလာပေါ့တာအနနေဲ့ အသငျးရဲ့အနာဂတျမှာ သူဆကျရှိနဖေို့ ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့ခွငျးလို့ သိရတယျ။
​၂၀၂၀ ဖဖေျောဝါရီကနစေလို့ ဒူးဒဏျရာကွောငျ့ မနျစီးတီးမှာ ပှဲကစားခှငျ့ လှဲခြျောခဲ့ရတဲ့ အဂှယျရို တနှဈတာနီးပါး အနားယူအပွီးမှာ ထူထူထောငျထောငျပွနျဖွဈလာပမေယျ့လညျး ခွစှေမျးပိုငျးမှာတော့ အသကျအရှယျက စကားပွောလာပွီး အကပြိုငျးရောကျလာပွီလို့ ဝဖေနျမှုတှကေို တရစပျခံခဲ့ရတာပါ။
မနျစီးတီးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖိုငျနယျရှုံးပှဲမှာလညျး အသငျးရဲ့ တိုကျစဈအတှကျ စတာလငျနရော လူစားဝငျလာခဲ့ပမေယျ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈက ကြူပီအာကို နောကျကအြနိုငျဂိုးနဲ့ အပွာရောငျတို့ကို ခနျြပီယံဖွဈစခေဲ့တဲ့ နုပြိုထကျ​မွကျနတေဲ့ ခွစှေမျးပိုငျရှငျ အဂှယျရိုပြောကျဆုံးသှားခဲ့တာကို တှရေ့ပွီး ယကျကနျယကျကနျနဲ့သာ အသငျးကို အကြိုးမပွုနိုငျတာကို အထငျးသားမွငျခဲ့ရတယျ။
ဒီလိုအနအေထားမှာ ဘာစီလိုနာအနနေဲ့ အဂှယျရိုကို ဘာကွောငျ့ အရဲစှနျ့ပွီး ယုံကွညျကိုးစားပွီး ချေါယူခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှအေတှကျ အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးဟာ ထိပျဆုံးကအဖွတေခု ဖွဈနိုငျနပေမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ အသငျးမှာ မကျဆီဆကျနဖေို့ ကောကျရိုးမြှငျတခုကို ကောကျဆှဲခဲ့လသေလားဆိုတဲ့ မှနျးဆခကျြတှေ ရှိလာတာဖွဈတယျ။.
ဘာစီလိုနာဟာ လကျရှိမှာ ယူရို ၁.၂ ဘီလီယံ အကွှေးတငျနတောဖွဈပွီး ဒါဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈပိုငျးတှကေ ကျောတငျညို၊ ဒမျဘီလီတို့ ဥပမာတှလေို သဲထဲရသှေနျဖွဈခဲ့တဲ့ အပွောငျးအရှအေ့မှားတှရေဲ့ နောကျဆကျတှဲဒဏျခံနရေခွငျးဖွဈကွောငျး ဆိုရမယျ့နောကျ ခနျြပီယံလိဂျမှာ စောစီးစှာ ဖြာလိပျခဲ့ရခွငျးက အသငျးရဲ့ပုံရိပျနဲ့ ဝငျငှကေို မွနေိမျ့ရာ လှံစိုကျဖွဈစခေဲ့တယျ။
ဂီနီ ဗိုငျနယျဒမျကို ရရှိခဲ့ခွငျးနဲ့ ၃ နှဈစာခြုပျခြုပျဆိုနိုငျခဲ့ခွငျး၊ အဂှယျရိုရောကျရှိလာခဲ့ခွငျးတှရေဲ့နောကျမှာတော့ သူတို့ ၂ ဦးစလုံးဟာ အသကျ ၃၀ နဲ့အထကျ ကစားသမားတှဖွေဈနလေို့ ဘာစီလိုနာနညျးပွ ရျောနယျကိုးမနျးအနနေဲ့ အသငျးရဲ့ရရှေညျအနာဂတျစီမံကိနျးအတှကျညျး လူငယျသှေးသဈတှကေို အပွောငျးအရှမှေ့ာ ဆကျလကျဖွညျ့တငျးလာဖှယျ ရှိနတေယျ။
လာမယျ့ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ အီမာဆနျ ရှိုငျရယျလျနဲ့ အဲရဈ ဂါစီယာတို့ရဲ့ အပွောငျးအရှအေ့ပွီးသတျတှကေို ဘာစီလိုနာအသငျးက ဆကျလကျကွငွောသှားဖို့ သခြောသလောကျရှိနတေဲ့အပွငျ ဂရိဇျမနျးကို အားပွိုငျဖို့ နယျသာလနျတောငျပံတိုကျစဈမှူး မမျးဖစ်စ ဒီပိုငျးကိုပါ နူးကမျ့ဆီ ချေါဆောငျလာဖှယျရှိနတေယျလို့ အနီးစပျဆုံးသတငျးတှအေရ သိထားရပါတယျ။
“ကြှနျတျောနဲ့ မကျဆီနဲ့ အတူတှဲကစားဖို့ ​မြှျောလငျ့ထားကွပါစို့။ မကျဆီရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြမှာပဲ အရာရာအားလုံးက မူတညျနပေါတယျဗြာ”လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ နူးကမျ့အဝငျလမျးက အဂှယျရိုရဲ့ စကားအရ မကျဆီ+အဂှယျရို+ဒီပိုငျး တခတျေနဲ့ ဘာစီလိုနာတခတျေကို တစငျပွနျထောငျမယျဆိုတဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြတှကေ ရပေနျးစားလာနခွေငျးဟာ ကတျတလနျအသငျးရဲ့ ကောငျးသော နိမိတျ၊ ကောငျးသာ လက်ခဏာတှဖွေဈလာတော့မလားဆိုတာကတော့…။
ZAWGYI: ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးဆာဂျီယို အဂွယ်ရိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ဆယ်စုနှစ်တခုအကြာ သံယောဇဉ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး မန်စီးတီးကနေ ထွက်ခွာရချိန်မှာ ကတ်တလန်အသင်းကတော့ အသက် ၃၂ နှစ်သားကို စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေး ယူရိုသန်း ၁၀၀ နဲ့ ချည်နှောင်ပြီး တန်ဖိုးကြီးကြီးထားသွားခဲ့တာပါ။
မက်ဆီအနေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလွန်းခဲ့တဲ့ MSN တိုက်စစ်အတွဲကို ဖော်ဆောင်ခဲ့အပြီး ဆွာရက်ဇ်၊ နေမာတို့နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရချိန်မှာ သူ့ရဲ့အာဂျင်တိုင်းအသင်းဖော် အဂွယ်ရိုနဲ့ တွဲကစားချင်ကြောင်း ဘာစီလိုနာကို တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ အသင်းဥက္ကဌလာပေါ့တာအနေနဲ့ အသင်းရဲ့အနာဂတ်မှာ သူဆက်ရှိနေဖို့ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ခြင်းလို့ သိရတယ်။
​၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီကနေစလို့ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် မန်စီးတီးမှာ ပွဲကစားခွင့် လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ အဂွယ်ရို တနှစ်တာနီးပါး အနားယူအပြီးမှာ ထူထူထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်လာပေမယ့်လည်း ခြေစွမ်းပိုင်းမှာတော့ အသက်အရွယ်က စကားပြောလာပြီး အကျပိုင်းရောက်လာပြီလို့ ဝေဖန်မှုတွေကို တရစပ်ခံခဲ့ရတာပါ။
မန်စီးတီးရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ရှုံးပွဲမှာလည်း အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်အတွက် စတာလင်နေရာ လူစားဝင်လာခဲ့ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ကျူပီအာကို နောက်ကျအနိုင်ဂိုးနဲ့ အပြာရောင်တို့ကို ချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့တဲ့ နုပျိုထက်​မြက်နေတဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်ရှင် အဂွယ်ရိုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကို တွေ့ရပြီး ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့သာ အသင်းကို အကျိုးမပြုနိုင်တာကို အထင်းသားမြင်ခဲ့ရတယ်။
ဒီလိုအနေအထားမှာ ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ အဂွယ်ရိုကို ဘာကြောင့် အရဲစွန့်ပြီး ယုံကြည်ကိုးစားပြီး ခေါ်ယူခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဟာ ထိပ်ဆုံးကအဖြေတခု ဖြစ်နိုင်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ အသင်းမှာ မက်ဆီဆက်နေဖို့ ကောက်ရိုးမျှင်တခုကို ကောက်ဆွဲခဲ့လေသလားဆိုတဲ့ မှန်းဆချက်တွေ ရှိလာတာဖြစ်တယ်။.
ဘာစီလိုနာဟာ လက်ရှိမှာ ယူရို ၁.၂ ဘီလီယံ အကြွေးတင်နေတာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေက ကော်တင်ညို၊ ဒမ်ဘီလီတို့ ဥပမာတွေလို သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အမှားတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဒဏ်ခံနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုရမယ့်နောက် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ စောစီးစွာ ဖျာလိပ်ခဲ့ရခြင်းက အသင်းရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ ဝင်ငွေကို မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ဂီနီ ဗိုင်နယ်ဒမ်ကို ရရှိခဲ့ခြင်းနဲ့ ၃ နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်း၊ အဂွယ်ရိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းတွေရဲ့နောက်မှာတော့ သူတို့ ၂ ဦးစလုံးဟာ အသက် ၃၀ နဲ့အထက် ကစားသမားတွေဖြစ်နေလို့ ဘာစီလိုနာနည်းပြ ရော်နယ်ကိုးမန်းအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ရေရှည်အနာဂတ်စီမံကိန်းအတွက်ည်း လူငယ်သွေးသစ်တွေကို အပြောင်းအရွှေ့မှာ ဆက်လက်ဖြည့်တင်းလာဖွယ် ရှိနေတယ်။
လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အီမာဆန် ရွိုင်ရယ်လ်နဲ့ အဲရစ် ဂါစီယာတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အပြီးသတ်တွေကို ဘာစီလိုနာအသင်းက ဆက်လက်ကြေငြာသွားဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေတဲ့အပြင် ဂရိဇ်မန်းကို အားပြိုင်ဖို့ နယ်သာလန်တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး မမ်းဖစ္စ ဒီပိုင်းကိုပါ နူးကမ့်ဆီ ခေါ်ဆောင်လာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ အနီးစပ်ဆုံးသတင်းတွေအရ သိထားရပါတယ်။
“ကျွန်တော်နဲ့ မက်ဆီနဲ့ အတူတွဲကစားဖို့ ​မျှော်လင့်ထားကြပါစို့။ မက်ဆီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပဲ အရာရာအားလုံးက မူတည်နေပါတယ်ဗျာ”လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ နူးကမ့်အဝင်လမ်းက အဂွယ်ရိုရဲ့ စကားအရ မက်ဆီ+အဂွယ်ရို+ဒီပိုင်း တခေတ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတခေတ်ကို တစင်ပြန်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေက ရေပန်းစားလာနေခြင်းဟာ ကတ်တလန်အသင်းရဲ့ ကောင်းသော နိမိတ်၊ ကောင်းသာ လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတော့မလားဆိုတာကတော့…။
နမောမပါ ရျောနယျလျဒို ဦးဆောငျတဲ့ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး တိုကျစဈမှူး ၅ ဦး
ကှနျတဦေးဆောငျခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှဈရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အကောငျးဆုံးကစားသမား ၁၀ ဦး
ကိုဗဈကိစ်စမှာ ကံကောငျးနတေယျလို့ ပွောတဲ့...